ပို့စ်တင်ချိန် - 4/06/2014 09:14:00 PM
၅.၄.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ပန်းချီ မင်းကျော်ခိုင်၏ “ကျွန်တော်ခြစ်တဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများ (My Scratches Of Unconditional Pepole Heroes)” ဟူသော Scratche ကောက်ကြောင်းပန်းချီပြပွဲအား ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အောက်)ရှိ လောကနတ်ပန်းချီပြခန်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ပန်းချီမင်းကျော်ခိုင် သည် ငယ်စဉ်က ပန်းချီဆရာကြီး ဦးသန်းလွင်၊ ဦးမောင်မောင်သိန်း၊ ဦးသိန်းဟန်နှင့် ဦးလွန်းကြွယ် တို့ထံ တွင် ပန်းချီပညာရပ်အား ဆည်းပူးလေ့လာ သင်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၈၈ အရေးအခင်းမှအစပြု၍ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှု၊ နှိပ်စက်မှုများကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ဘဝကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ရပ်တည် ခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် အလုပ်များ မအားလပ်သည့်ကြားမှ သူတတ်စွမ်းသော ပန်းချီ ပညာ ရပ်ဖြင့် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးခဲ့ရသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် စွန့် လွှတ်၊ စွန့်စား၊ ပေးဆပ်နေကြသော သူရဲကောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အနစ်နာခံ၍ အတ္တများကို ဖြုတ်၍ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်တို့ဖြင့် အနစ်နာခံ ပေးဆပ်နေသူများအား ဂုဏ်ပြု၊ အသိမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေး၊ အနုပညာ၊ ကျောင်းသား၊ စာပေ၊ ဂီတ အစရှိသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတို့မှ ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ရုပ်ပုံလွှာ ပန်းချီကားများအား ရေးဆွဲ၍ ပြည်သူလူထုအား ပြသရောင်းချ၍ ရောင်းရငွေများအား ဖခင် - ဦးတင်ရွှေ၊ မိခင် - ဒေါ်သန်းစိန်တို့အား ဦးစွာကန်တော့၍ မိခင်ဖခင်တို့၏ ဆန္ဒအရ ထိုငွေများအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လှူဒါန်းမည်ဟု သိရှိရသည်။ ယင်းအခမ်းအနား သို့ ပန်းချီမင်းကျော်ခိုင်၏ ဖခင် ဦးတင်ရွှေ၊ မိခင် ဒေါ်သန်းစိန်၊ ဦးဝင်းထိန် (NLD)၊ ဦးရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း)၊ ကိုနေဝင်း၊ ကိုသားထွေးနှင့် ပန်းရဲ့လမ်း အဖွဲ့သားများ၊ စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဝင်း ဖေ၊ စည်သူမောင်၊ ကိုမင်းသိုက်၊ ၈၈ အရေးအခင်းတွင် ကျဆုံးခဲ့သော အာဇာနည်ကျောင်းသူ မဝင်းမော် ၏မိခင်၊ ဖခင်နှင့် မင်းကျော်ခိုင်အား ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားကြသော နိုင်ငံရေး၊ စာပေ၊ ဂီတပညာရှင် များ၊ ပန်းချီပညာရှင်များ၊ မိတ်သင်္ဂဟများနှင့် ဧည့်ပရိသတ်များဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ လာရောက်၍ အားပေးချီးမြှင့်ကြသည်ကို ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေစဉ် ဝမ်းသာအားရစွာ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မင်းကျော်ခိုင်သည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်ရေးဆွဲထားသော ပန်းချီ ကားများအား မြန်မာပြည်တွင် ပြသခွင့် အပိတ်ခံထားရသည့်အချိန်၌ သူနေထိုင်သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့တွင် KYAW THU FIRST BREAK OUT ဟူ၍ ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ယခုသူ၏ ပန်းချီပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ကျွန်တော့်အား ဖွင့်ပွဲအမှာစကား ပြောကြားရန် ပြန်လည်တောင်းဆို လာ သည့်အတွက် ကျွန်တော်သူ၏ ဖိတ်စာရလျှင်ရခြင်း ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးချမိခဲ့သည်။ ထိုကဗျာအား ပန်းချီပြပွဲ ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်သည့် နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်တွင် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း “ပန်းရဲ့လမ်း” အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြပွဲသို့ လာရောက်ကြသော ဧည့်ပရိတ်သတ်များအား ရွတ်ဖတ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတော့သည်။ ယင်းကဗျာ ရွတ်ဖတ်နေစဉ် ကျွန်တော်နားတွင် "ကျွန်တော်ခြစ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများအားလုံး ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်၊ ခံယူချက်တွေ မပြောင်းလဲဘဲ ပြည်သူအပေါ် သစ္စာမဖောက်တာဘဲ မြင်ချင်ပါတယ်" ဟူသော အမေရိကန် နိုင်ငံနေ အဝေးရောက် သူငယ်ချင်း မင်းကျော်ခိုင်၏ မှာကြားချက် ပြောစကားများသည် ပဲ့တင်ထပ်လျှက် ရှိပါတော့သည်။ ကျွန်တော်၏ ကဗျာမှာ "အခြစ်ကြီးသူတုိ့အကြောင်း" ဟု အမည်တပ်ထားခဲ့သည်။
ပြောင်းလဲ လှည့်ဖြားနေတဲ့ ခေတ်စနစ်တွေထဲမှာ
ဘဝပေါင်းများစွာ ပစ်ခြွေချခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်
အချစ်စစ်၊ အချစ်မှန်တို့နဲ့ ပေးဆပ်ကူညီ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့
သူရဲကောင်းအစစ်တွေ အများကြီးပါ သူငယ်ချင်း ….
တစ်ချို့က … ဖူးငုံပွင့်လာကြပြီ။
တစ်ချို့က … ပွင့်အာနေကြပြီ။
တစ်ချို့က … နွမ်းဖတ်လာကြပြီ။
တစ်ချို့ကတော့ … ကြွေလွင့်သွားရှာခဲ့ကြပြီ။
သူတို့ … သူတို့ကို မှတ်တိုင်ထူ ဂုဏ်ပြုရေးခြစ်လိုက်တဲ့
အမေရိကားက … မင်းကျော်ခိုင်
နယူးယောက်က … မင်းကျော်ခိုင်
ဘရွတ်ကလင်းက … မင်းကျော်ခိုင်
ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း … မင်းကျော်ခိုင်
မင်းခြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကလည်း တိုင်းပြည်ကို ချစ်နေဆဲပါ။
မင်းခြစ်ထိုက်အောင်လည်း နိုင်ငံကို ပေးဆပ်နေဆဲပါ။
မင်းခြစ်ရကျိုးနပ်အောင်လည်း ပြည်သူကို ကူညီနေဆဲပါ။
မင်းခြစ်ချင်အောင်လည်း လူထုကို အနစ်နာခံ ဖေးမနေဆဲပါ။
အရေးကြီးတာက … စစ်မဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့
ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးရမယ့် ဘဝတွေပါ။
ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံမှ နောင်တဆိုတာ မရှိရမယ့် ဘဝတွေပါ။
နောင်တဆိုတာ မရှိစေချင်တဲ့ မင်းရဲ့ (ပုဂ္ဂလိက ပရဟိတ) စေတနာနဲ့ ရဲရဲကြီးခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါမှ သူတို့တွေ .. ပြဒါးသုတ်ထားတဲ့မှန်ကို ကြည့်ရှုကြသလို
သူတို့တွေ .. ကြည့်မှန်ကို ကြည့်ရှုကြသလို ကိုယ့်မျက်နှာ ကိုယ်ပြန်မြင်နိုင်ကြပြီး အနှစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေ အရိုးမတွန်ခင်လေးမှာ သူတို့တွေ “ပြန်လည်ပေးဆပ်ကြပါစို့” ဆိုတဲ့ အသိတရားလေးရပြီး သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲ စာနာစိတ်ကလေး မွေးဖွားလာနိုင်အောင် အချိန်မီ မင်းရဲရဲကြီး ဆွဲခြစ်ပြလိုက်စမ်းပါ သူငယ်ချင်း မင်းကျော်ခိုင်ရေ …. ။
မင်းခြစ်တာခံခဲ့ရတဲ့ … မင်းကိုလည်း ပြန်ချစ်တဲ့
ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်ကိုချစ်သော မင်းကျော်ခိုင်၊ ပြည်သူကိုချစ်သော မင်းကျော်ခိုင်၊ ပန်းချီကိုချစ် သော မင်းကျော်ခိုင်၊ အာဏာရှင်ကို ရွံမုန်းသော မင်းကျော်ခိုင်၏ ဆန္ဒအတိုင်း မင်းကျော်ခိုင် ခြစ်ခဲ့သော ပြည်သူဘက်တော်သားများနှင့် မင်းကျော်ခိုင် ထပ်မံ၍ ခြစ်မည်ဖြစ်သော ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများသည် အစဉ်ထာဝရ တိုင်းပြည်၊ လူမျိုး၊ ပြည်သူလူထုတို့အပေါ် ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသော မိမိတို့၏ ခံယူ ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မရောက်မချင်း “သစ္စာမဖောက်ကြေး” သံဓိဌာန်ချမှတ်ထားရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော် လိုက်ရပါတော့သည်။